ⓘ ကဇူးအို အစ်ရှိဂူရိုး
ကဇူးအို အစ်ရှိဂူရိုး (ဂျပန်: カズオ・イシグロ or 石黒 一雄 ;သည် ၁၉၅၄ခု နိုဝင်ဘာ၈ရက်ဖွား ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံ နာဂါဆာကီမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူအသက်ငါးနှစ်အရွယ် ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်တွင် သူ့မိသားစုသည် ဂျပန်မှ အဂ်လန် သို့ရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၈ ခုတွင် အစ်ရှိဂူရိုးသည် ကန့်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၁၉၈၀တွင် အရှေ့ အင်ဂျလီယာတက္ကသိုလ်၏ UAE ဖန်တီးရေးသားအတတ်ပညာသင်တန်းမှ သူ၏ မဟာဘွဲ့ကို ရယူခဲ့သည်။
အစ်ရှိဂူရိုးသည် အဂ်လိပ်ဘာသာစကားပြော အဆောက်အုံနယ်ပယ်တွင် ထင်ရှားအောင်မြင်သော ခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Man Booker Prize စကာတင်စာရင်းတွင် လေးကြိမ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် သူ၏ဝတ္ထု The Remains of the Day ဖြင့် ဆုရခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် The Times မှထုတ်ပြန်သော ၁၉၄၅ မှ ယနေ့ထိ အဂ်လိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားသော ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော စာရေးဆရာကြီး ငါးဆယ်စာရင်းတွင် အစ်ရှိဂူရိုးသည် အဆင့် ၃၂ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။
သူ၏ သတ္တမမြောက် ဝတ္ထု The Buried Giant ကို ၂၀၁၅ခု မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နှင့် အဂ်လန်နိုင်ငံများတွင် တပြိုင်နက် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
1. ငယ်ဘဝ နှင့် အစောပိုင်းကာလ
3.1. စာပေအရေးအသားဟန် အစ်ရှိဂူရိုးနှင့် ဂျပန်
အစ်ရှိဂူရိုးသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဂျပန်နာမည်ယူထားသူဖြစ်သည်။ သူ့အမည်ရှိ အစ်ရှိဂူရိုးဟူသော စကားလုံးမှာ `ကျောက်တုံးနက်´ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ သူ၏ ပထမဆုံး ဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားသည်။ သို့ရာတွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများကို ဖြေကြားရာတွင် သူသည် ဂျပန်စာပေအရေးအသားနှင့် သိပ်မရင်းနှီးကြောင်း ဖြေကြားထားသည်။ သို့သော်လည်း သူ့အရေးအသားများတွင် ဂျပန်စာရေးဆရာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို အနည်းနဲ့အများတွေ့နိုင်သည်။ ဂျပန်ရုပ်ရှင်များအထူးသဖြင့် Yasujirō Ozu နှင့် Mikio Naruse တို့၏ ရုပ်ရှင်များသည် သူ့အပေါ် သိသိသာသာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟု အစ်ရှိဂူရိုးက ဖြေကြားခဲ့ဖူးသည်။
A Pale View of Hills ၁၉၈၂
Never Let Me Go ၂၀၀၅
When We Were Orphans ၂၀၀၀
The Remains of the Day ၁၉၈၉
The Unconsoled ၁၉၉၅
The Buried Giant ၂၀၁၅
An Artist of the Floating World ၁၉၈၆
4.1. ဖန်တီးခဲ့သမျှ ဝတ္ထုများ
4.2. ဖန်တီးခဲ့သမျှ ဇာတ်ညွှန်းများ
The Gourmet BBCအတွက် မူရင်းဇာတ်ညွှန်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်Granta 43တွင် ပြန်လည် ထုတ်ဝေခဲ့ 1987
The White Countess မူရင်းဇာတ်ညွှန်း 2005
A Profile of Arthur J. Mason Channel 4အတွက် မူရင်းဇာတ်ညွှန်း 1984
The Saddest Music in the World မူရင်းဇာတ်လမ်း 2003
4.3. ဖန်တီးခဲ့သမျှ ဝတ္ထုတိုများ
"A Family Supper" Firebird, ၁၉၈၃
"A Village After Dark" The New Yorker, ၂၀၀၁
Introduction 7: Stories by New Writers Faber and Faber, ၁၉၈၁: ‘A Strange and Sometimes Sadness’, ‘Waiting for J’ and ‘Getting Poisoned’
Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall Faber and Faber, ၂၀၀၉
5. ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သော သူ၏လက်ရာများ
The White Countess ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် James Ivory မှရိုက်ကူးသည်။
The Remains of the Day ၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် James Ivory မှ ရိုက်ကူးသည်။
Never Let Me Go ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Mark Romanekမှ ရိုက်ကူးသည်။
၁၉၉၈: Chevalier de lOrdre des Arts et des Lettres
၁၉၈၉: Booker Prize ဆုကို The Remains of the Day ဖြင့်
၁၉၈၂: Winifred Holtby အမှတ်တရဆုကို A Pale View of Hills ဖြင့်
၁၉၈၆: Whitbread Prize ဆုကို An Artist of the Floating World ဖြင့်
A Pale View of Hills နှင့် The Buried Giant မှတပါး အစ်ရှိဂူရိုး၏ လက်ရာအများစုသည် စာပေဆုများတွင် စကာတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်ချည်းဖြစ်သည်။
2005 interview with Ishiguro in Sigla Magazine Archived3March 2006 at the Wayback Machine.
Susannah Hunnewell Spring 2008. "Kazuo Ishiguro, The Art of Fiction No. 196".
NHK WORLD December 2017. Exclusive Interview with Kazuo Ishiguro
Linda Richards October 2000. "January Interview: Kazuo Ishiguro".
Wikipedia: ကဇူးအို အစ်ရှိဂူရိုး